Isevisi yezobuchwepheshe nangemva kokuthengisa - iNanjing Reborn New Materials Co., Ltd.
I-Optical Brightener Agent
Isevisi yezobuchwepheshe nangemva kokuthengisa
INanjing Reborn New Materials Co, Ltd ihlala ithatha ukufunwa kwamakhasimende njengokuqondisa kwemizamo, iphikelela ngokuthi "Ukuphathwa okuhle kokukholwa, Ikhwalithi yokuqala, ikhasimende liphezulu" njengenqubomgomo eyisisekelo, iqinisa ukuzakhela. Futhi sizibophezele ekuhlinzekeni izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme nezifanelekile zokuqinisekisa isipiliyoni esihle sokuthenga kubasebenzisi
Ngakho-ke, sakha uhlelo olubucayi lwangemva kokuthengisa:
Sungula umqondo omuhle wenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa, sithembisa ukwenza umsebenzi omuhle wokuqeqesha abasebenzi, sithuthukise ulwazi lwabo lomkhiqizo, ukuqwashisa ngezinsizakalo nangemva kokuthengisa.
Izeluleko zamahhala eziku-inthanethi: I-imeyili, izinsizakalo zokweseka ezobuchwepheshe;
Inombolo yocingo:0086-25 -58853060
Sungula ifayela eliphelele lekhasimende ngalinye:
sebenzisa ukuphathwa okumisiwe, kusukela ekuthintaneni kwasekuqaleni, ukuthengisa, ukulethwa kuze kube sekugcineni, futhi uqinisekise ukuthi zonke izinyathelo zilungile.
Yazi kahle amakhasimende:
funda izidingo ezithile zamakhasimende ngensizakalo eyodwa kuya kweyodwa eyenziwe ngezifiso, uphendule izidingo, futhi usize amakhasimende ukuxazulula izinkinga zawo.
kule minyaka, imakethe yamakhemikhali ingaphansi kokuguqulwa okukhulu, ngakho-ke intengo yemakethe nokudilivwa kushintsha ngokushesha. Sizokwazisa amakhasimende ethu kusengaphambili ngezinto zokusetshenziswa nezinguquko zamanani, ukuze aqonde kahle imakethe, futhi enze amalungiselelo aphelele okuqala okuthengisa esikhathini esizayo.
Ikhwalithi yemikhiqizo ephathekayo:
lawula ikhwalithi yomkhiqizo kusuka kumthombo wezinto ezingavuthiwe, futhi wenze umsebenzi omuhle wokuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokulethwa, ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Sineqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe, elinganikeza ukusekelwa okuphelele kobuchwepheshe ngesikhathi. Futhi usize ukuxazulula izinkinga ekusetshenzisweni, thuthukisa ifomula lomkhiqizo ukuthola umphumela oqondisiwe.
Ngasikhathi sinye, siphinde sibambisane neYunivesithi, sigcina ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, ucwaningo nokuthuthukisa imikhiqizo emisha, uhlelo olusha.
Siphinde futhi sinikeze ngezinsizakalo ezibanzi zokubonisana ngentuthuko yaphesheya kwezilwandle kanye nokuhlanganiswa nokutholwa kwamabhizinisi asezingeni eliphakeme asekhaya.
Ikheli: Igumbi 1409, 20 Xinghuo Road, Pukou District, Nanjing City, Isifundazwe Jiangsu, China 210032